साइकलको 'अधिराज्य' - China Radio International
(GMT+08:00) 2015-01-13 16:37:58
चीनको राजधानी पैचिङलाई 'किङडम अफ साइकल' अर्थात् साइकलको अधिराज्य भनिन्छ। सन् 2012 को तथ्याङ्कअनुसार पैचिङमा स्थायी बसोबास भएका बासिन्दाको संख्या एक करोड 29 लाख 75 हजार छ भने अस्थायी बसोबास गर्नेहरू2करोड6लाख 93 हजार छन्। यस हिसाबले यस सहरको जनसंख्या3करोड 35 लाखभन्दा बढी छ। यहाँ 60 लाख कारहरू, 30 हजार सार्वजनिक सेवाका बसहरू छन् भने झन्डै एक करोड जति साइकलहरू। घरमा कार हुनेहरूले पनि साइकल किनेकै हुन्छन्। अत्यधिक साइकल भएकैले यो सहरलाई साइकलको अधिराज्य भनिएको हो।
अत्यधिक ट्राफिक जामका कारण सार्वजनिक सवारीबाट कार्यालय तथा व्यवसाय भ्याउनलाई हम्मे पर्छ। जमिनमुनि गुड्ने रेल जाममा नपरे पनि सहरका हरेक भागमा पुग्न सम्भव छैन। साइकल प्रयोगले वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्छ। यो चलाउँदा हुने शारीरिक व्यायामले मानव स्वास्थ्यलाई थप तन्दुरुस्त राख्छ। छवटा चक्रपथ रहेको पैचिङमा यसका लागि सडकमा छुट्टै लेन छ। किशोरकिशोरीदेखि पौढहरू पनि साइकल यात्रा गर्न रमाइलो मान्छन्। लामो समय पैचिङमा बस्ने विदेशी तथा छोटो समय घुम्न आएका पर्यटकहरू पनि साइकल चढेरै पैचिङका कुनाकाप्चा अवलोकन गरिरहेका हुन्छन्।
पैचिङमा साइकल भाडामा दिने थुप्रै निजी कम्पनी थिए। सन् 2008 मा यहाँ सम्पन्न २९औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा पैचिङ नगरपालिकाले ती निजी कम्पनीहरू हटाएर आफैँले साइकल भाडामा लगाउने प्रणाली स्थापना गर्‍यो। सुरुमा पैचिङका स्थायी बासिन्दाका लागि मात्र सञ्चालित भाडाका साइकलहरू सन् 2012 देखि सर्वसाधारण र विदेशीका लागि पनि खुला गरियो। 'पैचिङ बाइक सेयरिङ' नाम दिइएको यस प्रणालीमा पैचिङ सहरभर हजारभन्दा बढी स्टेसनमा 30 हजारभन्दा बढी साइकल राखिएका छन्। सन् 2015 भित्र पैचिङमा 50 हजार साइकल राख्ने योजना नगरपालिकाको छ। साइकल र स्टेसन संख्याका आधारमा यो संसारकै सबैभन्दा ठूलो 'बाइक सेयरिङ' पनि हो।
सार्वजनिक स्थानमा स्टेसन बनाएर राखिएका यस्ता साइकल प्रयोग गर्नँभन्दा पहिले आफ्नो नाम दर्ता गर्नपर्छ। सुरुमा दुई सय युआन धरौटी राख्नुपर्छ। र, पैचिङमा सार्वजनिक सवारी साधन बस तथा सबवे चढ्दा प्रयोग गरिने स्मार्ट कार्ड पनि चाहिन्छ। स्टेसनमा साइकल राखेको ठाउँमा कार्ड 'स्वाइप' गरेपछि साँचो खुल्छ र तीस सेकेन्डभित्र साइकल झिक्नुपर्छ।
यो प्रणालीबाट साइकल लिएपछि सुरुको घन्टा निःशुल्क चलाउन पाइन्छ। त्यसपछि घन्टाको एक युआनको दरले भाडा लाग्ने गर्छ। एक दिनको बढीमा दस युआन भाडा लाग्छ र बढीमा तीन दिनसम्म स्टेसनबाट साइकल झिकेर चलाउन सकिन्छ। तीन दिनभन्दा बढीसम्म पनि साइकल फिर्ता नभए दैनिक बीस युआनले धरौटीबाट रकम घटाइन्छ।
धेरैजसो चिनियाँले यस्ता साइकलहरू सित्तैमा प्रयोग गर्छन्। साइकल चलाउँदै जाने र एक घन्टा हुनुअगाडि नै त्यसलाई नजिकैको स्टेसनमा छोडेर फेरि अर्को लिएर जाने चलाखी उपनाउँछन् उनीहरूले। हरेक घन्टा नपुग्दै साइकल परिवर्तन गरेर दिनभर नै सित्तै चलाउन सकिन्छ।
नगरपालिकाले मुनाफा कमाउनभन्दा पनि ट्राफिक व्यवस्था मिलाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर यो व्यवस्था गरेको हो। यी सबै पाइडल चलाएर गुडाउने प्रविधिका छन्। पैचिङमा मोटरसाइकल चलाउन पाइन्न। त्यसैले कतिपय चिनियाँले झट्ट हेर्दा मोटरसाइकलजस्ता देखिने साइकल पनि प्रयोग गर्छन्। यस्ता साइकल चलाउन सजिलो र आरामदायी हुन्छन्।
चीनमा एउटा भनाइ छ- यदि तिम्रो साइकल हराएको छैन भने तिमी पैचिङबासी नै होइनौ। कतिपय चिनियाँ त साइकल हराएको कुरा औँला भाँचेरै गन्छन् । प्रहरीकहाँ उजुरी गर्दा-गर्दा थाकेकाहरू उत्तिकै छन्। सन् 2007 मा पैचिङ प्रहरीले साइकल चोरेको अभियोगमा3हजार7सय 8 जनालाई पक्रेको थियो। उनीहरूबाट 11 हजार एक सय 11 साइकल र 27 वटा साना 'चोर बजार' पत्ता लागेको थियो। यो समुद्रमा देखिएको आइसवर्ग मात्र भएको उल्लेख गर्छन् चिनियाँहरू।
पैचिङमा सरदर एक वर्षमा पचास हजारभन्दा बढी साइकल चोरी हुने गर्छ। त्यही भएर सन् २००१ मा साइकल चोरीकै कथामा आधारित 'पैचिङ साइकल' नामक चलचित्र निर्माण गरिएको थियो जसले बर्लिन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलमा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार हात पारेको थियो। यो चलचित्रले अमेरिकी बक्स अफिसमा पनि राम्रो व्यवसाय गरेको थियो।
जतातै सीसीटीभीबाट निगरानी राखिएको भए पनि साइकल चोरी यहाँको नियमित र सामान्य क्रियाकलाप हो।
निवृत्त शिक्षक मा चिछियाङ आफ्नो पाँचपटक साइकल हराएको सुनाउँछन्। विश्व विद्यालयबाट स्नातक चाङ छु चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् किनभने उनले कलेज समयमा एकपटक मात्र साइकल हराएका छन्। यसबारे उनले एउटा रमाइलो किस्सा सुनाए। उनका एक प्राध्यापकले थुप्रै हराएपछि नयाँ किनेको साइकलमा6वटा ताला लगाएर एउटा सूचना लेखेछन्, 'चोर महोदय अब पनि चोर्न सक्छौ?' पछि पढाएर र्फकदा चोरले साइकल त चोरेनछ तर त्यसमा अर्को ताला थपेर सातवटा बनाएछ र सूचना लेखेछ, 'के तिमी यो ताला खोल्न सक्छौ?'
साभारः कान्तिपुर दैनिक, 2071 पुस 26 गते (2015 जनवरी10) शनिबार।